မိမိကြည့်ရှူနားထောင်နေတဲ့ video . mp3 တွေကို iWisoft Free Video Downloader အသုံးပြု၍ လျှင်မြန် လွယ်ကူလှစွာဒေါင်းမယ် - အရူးလေး ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
မိမိကြည့်ရှူနားထောင်နေတဲ့ video . mp3 တွေကို iWisoft Free Video Downloader အသုံးပြု၍ လျှင်မြန် လွယ်ကူလှစွာဒေါင်းမယ်
ဒီဆော့ဝဲအမျိုးအစားကို ရင်းနှီး ပြီးသားနေမှာပါ ဒီကောင်အမျိုးအစားက ၃မျိုးပဲ ရှိပါတယ် ။
free စစ်စစ် တွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာကီးမှလဲမလိုအပ်ပါဘူး ။
ပေါ့ပါး တဲ့အတွက် ကွန်ပြူတာတိုင်းမှာ မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲတစ်ခုပါပဲ ။
ခုဒီ iWisoft Free Video Downloader ဆော့ဝဲက
အင်တာနက် ၀ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှာ မိမိနားထောင်နေကြည့်နေတဲ့ ဗီဒီယို mp3 တွေကို အလွယ်တကူ ဒေါင်းနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ
(နာကြိုက်လို့ ပြောတာနော် ဟီးးး)
ဒီဆော့ဝဲ ကို ဒီနေရာမှာ အရင်ဆုံးဒေါင်းလိုက်ပါ။
Run ပြီးပြီ ဆိုရင် အမြဲတမ်းဖွင့်ထားပါ
သင်အင်တာနက်စာမျက်နှာတစ်ခုခုဖွင့်လို့ ဗီဒီယို mp3 တစ်ခုခု လာနေတယ်ဆိုရင် အပေါ်ပုံလေးအတိုင်း ဒေါင်းလောင့်လင့်လေး ညာဘက်ထောင့်ကနေတက်လာတာတွေ့ ပါလိမ့်မယ် ဒေါင်းချင်ရင် နိုပ်လိုက်ပေါ့ ။ နောက်တစ်ပုဒ်လာရင်လဲအဲလိုပဲ ၀င်းဒို လေးတက်လာပါလိမ့်မယ်
ဒေါင်းလောင့်နိုပ်ပြီးရင် ထပ်ပြီး အိုကေ ကိုနိုပ်ပေးပါ ။ပြီါ်ရင် ကွန်နက်ရှင်ကောင်းရင်တော့ ၁မိနစ်တောင်မကြာပါဘူး .
ကွန်ရှင်မကောင်းရင် အများဆုံး ၅ မိနစ်လောက်ပေါ့ မိမိဒေါင်းတဲ့ဖိုင်အကြီးအသေး အလိုက် ကြာပါလိမ့်မယ်
ပြီးသွားပါပြီ ။ ညာဘက်ထောင့်လေးမှာ open ၀င်းဒိုလေးတက်လာတာတွေ့ ရမှာပါ အဲကနေမဖွင့်ချင်လဲ
ဒီ ဒေါင်းထားတဲ့ဆော့ဝဲထဲက ဖိုင်လေးက်ု Right ကလင့်ပေးပြီး openfolder လေးကိုနိုပ်ပေးရင်ရပါပြီ ။
ဒီဆော့ဝဲ အမျိုးအစား သုံးမျိုး ကို
သွားကြည့်နိုင်ပါတယ် ။ ကြိုက်ရင် ဒေါင်းထားလိုက်ပေါ့ ။ အားလုံး စပါယ်ရှယ်ပါပဲ ၊